Ahoana ny fanatsarana ny fampisehoana menus amin'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | | Apple TV, Tutorials
Apple dia nitandrina manokana foana rehefa namolavola ny fitaovany. Mila mamaky ny menio Accessibility an'ny iPhone na iPad fotsiny isika amin'izay hahitantsika ireo fikirana ahafahantsika manova azy mpampiasa manana olana amin'ny fahitana, fandrenesana na fifanakalozana. Ireo karazana fanitsiana ireo dia nentina ihany koa, farafaharatsiny, ho an'ny Apple TV.
Ny fanaraha-maso Apple TV dia mora be noho ny Siri Remote vaovao, raha tsy hoe manana olana amin'ny fahitana sasany isika na sarotra ho antsika fotsiny ny manavaka ny akanjo tsotra izay misy ny kursor eo amin'ny efijery fahitalaviantsika.
Misaotra ny fikirakirana Accessibility azontsika atao ny manampy boaty iray amin'ny kursor mba hahitantsika azy amin'ny fomba mora kokoa raha sahirana isika mahita azy. Ao amin'ny lesona manaraka dia hasehoko anao ny fomba fanatsarana ny fampisehoana ireo menus amin'ny Apple TV ho an'ireo mpampiasa rehetra manana olana amin'ny fahitana.
1 Ahenao ny mangarahara amin'ny Apple TV
2 Ahenao ny hetsin'ny menio amin'ny Apple TV
Ahenao ny mangarahara amin'ny Apple TV
Ankehitriny dia tsy maintsy mitady Accessibility> isika Ampitomboy ny fifanoherana.
Ankehitriny dia tsy maintsy mihetsika isika Ahena ny mangarahara hampihenana ny mangarahara ao ambadiky ny menus Apple TV.
Ahenao ny hetsin'ny menio amin'ny Apple TV
ao anatin'ny Fikirana mankany isika General.
Ao anatin'ny Jeneraly dia mitady ny safidy isika Accessibility ary tsy miala izahay Ahenao ny hetsika. Izany dia hampihena ny hetsiky ny sary masina, sary mihetsika / sarimihetsika aseho eo amin'ny efijery an-trano, ary ireo singan'ny menio ao amin'ny fitaovana. Manomboka amin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy karazana sarimiaina aseho rehefa mandroso amin'ireo menus samihafa isika.
Raha manatsara hatrany ny fampisehoana ireo menus fitaovana ireo safidy ireo dia mbola afaka misafidy ihany isika ovay ny loko afovoan'ny menio sy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sahy amin'ny maha loharanom-baovao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ahoana ny fanatsarana ny fampisehoana menio amin'ny Apple TV
Mpifaninana vaovao amin'ny Apple Watch, ilay famantaranandro elektronika avy amin'ny Fossil